वेलैमा उपचार हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यमा हुनसक्ने खतरा टर्यो « Mechipost.com
वेलैमा उपचार हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यमा हुनसक्ने खतरा टर्यो
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे चिकित्सकहरूले जानकारी दिएका छन् । जस अनुसार उहाँको स्वास्थ्य खतरामुक्त रहेको छ, यद्यपि अझै एक सातासम्म अस्पतालमै राखेर उपचार गरिनेछ ।
शुक्रबार प्रमको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरुले पत्रकार सम्मेलन गरी उहाँको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी दिएका हुन् । उहाँको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार भइरहेको र खतरामुक्त रहेको प्रमका निजी चिकित्सक डा. दिव्या सिंह शाहले जानकारी दिनुभयो ।
“उहाँ (प्रधानमन्त्री) को स्वास्थ्यमा हामीले सोचेभन्दा राम्रोसँग सुधार भएको छ” डा. दिव्याले भन्नुभयो, “घाउ निको हुन कम्तीमा १० दिन लाग्ने भएकाले अझै एक सातासम्म आईसियुमै राखेर उपचार गर्नेछौँ ।”
चाँडै डिस्चार्ज गर्दा संक्रमण बल्झिन सक्ने भएर सो समस्याबाट जोगाउन एक सातासम्म अस्पतालमै राख्ने निर्णय भएको उहाँको भनाइ छ । एडेन्डिक्स फुट्दा पेटमा संक्रमण फैलने सम्भावना मृर्गाैलाको समस्या भएका बिरामीलाइ अरुलाई भन्दा बढी हुने भएकाले प्रमको स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिइएको चिकित्सकहरूको भनाइ थियो ।
उहाँको उपचारमा अर्का डा. रमेश सिंह भण्डारीले भने संक्रमण पेटभरी फैलिएको जानकारी दिँदै उचित समयमै उपचार भएकाले खतरा टरेको बताउनुभयो । त्रिवि शिक्षण अस्पतालस्थित मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा मंगलबार प्रम ओलीको एपेन्डिसाइटिसको आकस्मिक शल्यक्रिया गरिएको थियो । त्यसको तीन दिनपछि चिकित्सकहरूले पत्रकार सम्मेलन गरी उहाँको स्वास्थ्यमा सुधार भइरहेको बताएका हुन् ।